I-Doucimar Imperilion - I-Airbnb
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguAnny
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uAnny iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Le pavilion ikwikona yeparadesi kukho yonke into
- ukusuka elangeni iiyure ezili-10 ngosuku, iintsuku ezingama-352 ngonyaka
- iqondo lobushushu efanelekileyo 18 ° ebusuku kunye 28 ° emini
-indawo yangasemva yenyanga, amahlathi epine, iintaba ezizodwa zokunyuka intaba, iindlela ezintle.
- iqondo lobushushu lolwandle alehli ngaphantsi kwe-24 ° ngoJanuwari.
Ibekwe embindini wesiqithi ekunene ngaselwandle, unokubona ukusuka kwithafa iSao Vicente kunye nesixeko saseMindelo. Le meko yenza kube nokwenzeka ukwenza konke ukunyuka ngeekhilomitha ezimbalwa ngemoto. Phambi kwakho ulwandle nasemva kwentaba kunye nelanga ngaphezu kwakho yonke imihla. Umyezo umnandi kakhulu ngemithi yesundu kunye neentyantyambo, i-swimming pool i-24 ° ebusika kunye ne-29 ° ngamaxesha ashushu. Ibha encinci yaselwandle isandula kusekwa kanye ngaphandle kwaye unokuqesha ii-quads. U-Isa uya kukunyamekela ukucoca kwakho kunye nempahla kwaye uRildo wenza konke ukugcinwa kwegadi. Bathetha isiFrentshi kwaye unokubacela ingcebiso baya kukuvuyela ukukunceda.
4.62 · Izimvo eziyi-21
Zizindlu nje ezilishumi elinambini ePraia de Topo kwaye ngoku ukongezelela ibhari encinci entle yolwandle, ungatya nalapho.